Maalinta: Diseembar 28, 2018
Dhamaadka mashruuca Wadada Sapanca
Degmada Sapanca ee Sakarya waxay sameysay bayaan ku saabsan mashruuca xariga ee Duqa Magaalada Sapanca Assoc. Dr. Aydın Yılmazer wuxuu yidhi, Wez Waxaan saxeexnay liisanka dhismaha ee mashruuceena waxanan ka faa iidaysanaynaa Sapanca, Sakarya iyo dhammaan dadkayaga. [More ...]
Gudoomiyaha Aktas: S Gaadiidka Deyince Akan Sular Durur Ak
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktaş wuxuu dhagaystay dhibaatooyinka iyo dalabka muwaadiniinta ku nool xaafada Fatih wuxuuna yiri: iz waxaan ku jirnaa xilli dhibaato dhaqaale. Laakiin aniga ahaan, taraafikada iyo gaadiidku waxay joojinayaan socodka biyaha. Gobol halkan [More ...]
Sannadka Cusub ee Magaalada Bursa
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, 2018 isku xirka 2019 31 Diseembar Isniinta fiidka iyo 1 Janaayo Talaadada si loo hubiyo in muwaadiniinta nabdoon ee nabadgelyada leh ay qaateen taxaddar kasta. Dawlada Hoose ee Bursa, muwaadiniinta way wanaagsan yihiin [More ...]
Madaxa Qaybta Sayniska ee Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun Serkan Çam ayaa sheegay in nidaamka tareenka ee loogu talo galay OMU Kurupelit Campus uu diyaar u yahay oo loo gaadhsiin doono SAMULAŞ illaa Febraayo 2019 Ondokuz Mayıs University (OMÜ) [More ...]
Isbitaalka Dowlada ee Degmada Çaycuma, oo loogu tala galay in lagu bixiyo dadka lugaynaya ee ka yimaada Wadada Abdullah Kalaycı, Duqa Magaalada Bülent Kantarcı'nın ayaa sameeyay safarkii ugu horeeyey. Duqa Magaalada Çaycuma Bülent Kantarcı wuxuu kamid yahay balanqaadyadii doorashada deegaanka ee 2014 [More ...]
Sida saxda ah fahamka muwaaddiniinta Izmir ee ku dhibtooday gaadiid qaadista waddooyinka maalmihii 19 ayaa soo gebogebeeynaya. Muwaadiniinta ku safraya metrooga ciriiriga ah iyo basaska, ee ku xayiran taraafikada daqiiqado,, Filanaan waa ku filan artık [More ...]
29 U dhaqaaqista Madaarka Istanbul, oo la furay bishii Oktoobar, dib ayaa loo dhigay. Taariikhda laga rarayo gegida diyaaradaha ee Atatürk loona wareejiyo gegida diyaaradaha cusub waxaa loo go'aamiyaa sida 3 March 2019. Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMI) ayaa Khamiista lagu wargaliyay hay'adaha iyo shirkadaha ay khusayso. [More ...]
Maamulka IZBAN waxay ka noqdeen boqolkiiba boqol xadka 26, "Haddii ay aqbalaan mushaharka mashiinka waxay noqon lahaayeen 4 kun 152 TL". Iyagoo ku nuuxnuuxsaday in tiradaasi aan lagu gaadhin qiimaha lagu soo rogay, ayay shaqaaluhu yidhaahdeen, “İZBAN [More ...]
Milyaneerka Doorashada Doorashada ee Boqortooyada Ankara 21 Age
Ankara Metro, oo wadata malaayiin rakaab ah sanad walba, waxay sanadka ugaga tagtay 21 gaadiid iyadoo la raacayo khadadka metrooga ee soo koraya. Boqolaal duulimaad, kumanaan rakaab ah ayaa qaaday maalintii. Dhammaantood waa ay gaari karaan halka ay ku socdaan iyagoon ku xayiran taraafikada Metro [More ...]
Booqashada Taageerada Atalay ee Shaqaalaha IZBAN
Maalintii 18 ee shaqo-joojinta shaqaalaha ee Nidaamka Suburban İzmir (İZBAN), Madaxweynaha TÜRK-Er Ergün Atalay wuxuu bixiyay booqasho uu ku taageerayo shaqaalaha. Wuxuu jeclaan lahaa inuu ku sugnaa Izmir bilowga howsha shaqo joojinta, laakiin waxaa ugu wacan wadaxaajoodka mushaharka ugu yar. [More ...]
Duqa Magaalada Eskişehir ee Magaalada Metro Yılmaz Büyükerşen wuxuu dhowaan booqday Garpark Parking Lot qiyaastii 300 gaadiid, kuwaas oo loo adeegsaday xaafada Hoşnudiye. Büyükerşen, Eskişehir'e wuxuu xasuusiyay mid kadib markii gaariga kale ee gawaarida la dhigto “gaagaaban [More ...]
Saldhig baseed oo casri ah oo leh 74 Million oo Bodrum ah
Muğla Metropolitan Municipal District Bodrum Degmada oo leh qiime dhul oo dhan 24 milyan 600 kun TL, boosteejooyinka basaska oo laga helayo 45 milyan 548 kun TL iyo 4 milyan oo TL wadarta tamarta cadceedda 74 [More ...]